Bolt yekuongorora nzira- Shanghai T&Y Hardware Indasitiri.
Zvipfigiso: zvemishini zvikamu, zvine cylindrical nzungu dzakakoshwa sunga. Rudzi rwekutsanya runosanganisira musoro uye sikuruu (cylindrical body ine yekunze shinda) inofanirwa kuiswa nati yekumisikidza kubatana kwezvikamu zviviri nepakati-maburi. Rudzi urwu rwekubatanidza runonzi bolting. Senge iyo nati kubva kubhaudhi pane inoyerera pasi, uye inogona kuita kuti zvikamu zviviri zviparadzaniswe, saka bhaudhi kubatana ndiko kubvisika kubatana. Kuongorora kweBolt kunogona kukamurwa kuita maviri marudzi eyakagadzirwa nemuchina, inotevera Chinese yekumisikidza network iwe yakateedzana zvakadzama.
Chakagadzirwa ndicho chakanyanya kusanzwisisika ndiko kushandiswa kwakanyanya kwekuonekwa kusingaenderane. Kuitira kudzikisira kubuda kwezvinhu zvisingaite, vashandi vese vekugadzira nenzira dzinoonekwa dzekurongedza kana zvigadzirwa zvekutumira kuti zviongororwe kusabvisa zvigadzirwa zvakaremara (kusanganisira kukuvara kwemeno, kusanganisa, ngura, nezvimwewo).
Idzi dzimwe nzira dzemuchina otomatiki kuona, kunyanya magnetic particle kuyedza.
Magnetic particle kuongorora ndiko kushandiswa kwehuremu hwebhaudhi mumagineti uye kudyidzana kwemagineti, kuitira kuti kuvepo kwekukanganisa kwebhaudhi (senge kutsemuka, slag, musanganiswa, nezvimwewo) kukwana uye kusiyanisa kwesimbi kusiyanisa, izvi zvinhu hazvisi kuenderera kwemagineti simba remagineti pachikamu chemagineti flux leakage ichaitika pamusoro peiyo workpiece leakage magnetic field inogadzirwa kukwezva kuumbwa kwemagineti kuremara mukuumbwa kwemagineti eupfu kuremara - magineti mamaki mune akakodzera mwenje mamiriro, kuratidza hurema munzvimbo uye chimiro, Iko kuunganidzwa kweiyi magnetic upfu yekucherechedza nekutsanangura, kwasvika chinangwa chekubvisa zvigadzirwa zvakashata.
KUMASHUREHuru hunhu hwekupisa kwakakurisa mabhaudhi uye nzungu
NEXTBolts zvakajairika kuomarara indekisi